भारतमा चार वर्षीया बहिनीलाई ब,’लात्कार गर्ने बझाङका युवकलाई फाँ,’सीको स,’जाय ! – Kavrepati
Home / समाचार / भारतमा चार वर्षीया बहिनीलाई ब,’लात्कार गर्ने बझाङका युवकलाई फाँ,’सीको स,’जाय !
admin3weeks ago	समाचार Leaveacomment 45 Views
धनगढी । आफ्नो सौतेनी बहिनीलाई ब,’लात्का’र गरेको भन्दै बझाङका एक युवकलाई भारतमा फाँ,’सी (मृ,’त्युदण्ड)को स,’जाय दिइएको छ ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाको जाजरदेवलमा आफ्नी चार वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई ब,’लात्का,’र गरेको आरोपमा ती युवकलाई भारतको अदालतले मृ,’त्युद,’ण्डको स,’जाय सुनाएको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
Previous दुर्गेश थापाले किने करोडौ मुल्यको बंगला
Next बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो, श्रीमती त पो’र्न’स्टार रहिछन्